काठमाडौंकाे धुलो सफा गर्ने मेरो काम होइन, गर्दिनँः विद्यासुन्दर शाक्य | नेपाल आज
काठमाडौंकाे धुलो सफा गर्ने मेरो काम होइन, गर्दिनँः विद्यासुन्दर शाक्य
मङ्गलबार, ३१ साउन २०७४ गते प्रकाशित
तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ तपाईंको सुरुआती दिन सकारात्मक देखिएन नि ?
निर्वा्चित जनप्रतिनिधि प्रविधिमैत्री होऊन् भनेर मोबाइल सुविधा दिने निर्णय गरिएको हो । आजको जमानामा जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट फोन दिनु ठूलो कुरा थिएन । तर, धेरै आलोचना भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन । अहिले फेरि मेयरले महँगो गाडी किन्यो भनिएको छ, जुन सरासर गलत हो । किनभने, नयाँ गाडी किन्ने निर्णय चुनावअघि नै भएको हो । म अहिले पनि कार्यकारी अधिकृतले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो गाडी नै चढ्छु । नयाँ गाडीमा नम्बर प्लेट नै राखिएको छैन ।
तपाईं त महानगरको रैथाने पनि, हिजो र आजको महानगरमा के फरक छ ? राम्रो भएको छ वा बर्बाद ?
हामी सानो छँदा काठमाडौँका सडकमा फोहोर देखिँदैनथ्यो । पहिला बरू घर फोहोर हुन्थे, सडक सफा र चिल्ला थिए । अहिले ठीक उल्टो भएको छ । अहिले घर सबैका सफा छन्, सडक ज्यादै फोहोर र दुर्ग्न्धित छन् ।
समय धेरै परिवर्तन भएको छ, त्यस अनुसार महानगर पनि बदलिएको छ । ०६२र६३ को जनआन्दोलनअघि पनि धेरै राम्रो थियो, त्यसपछि घर र जनसंख्या ज्यादै थपियो । सडक, ढल र पानी अपर्याप्त भयो, त्यसले समस्या अरू थप्दै गयो । काठमाडौँका रैथाने मात्रै यहाँ हुने हो भने कुनै पनि समस्या हुने थिएन, पानी पनि पुग्ने थियो, सडक पनि खाली नै हुन्छ । तर, अहिले यहाँका भन्दा बढी बाहिरका मानिसले यो सहर भरिएको छ । त्यसैले सरकारले समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्नेजस्तो भएको छ । यहाँको मतदाता संख्या पौने तीन लाख छ । तर, जनसंख्याचाहिँ ५० लाखको हाराहारीमा छ । यति सानो सहरमा यत्रो जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन ।
काठमाडौँमा उपलब्ध सेवा र पूर्वाधार अरू ठाउँमा पनि विस्तार हुनुपर्छ, जनता जुन उद्देश्यका लागि यहाँ आउँछन्, उनीहरूकै ठाउँमा त्यो उपलब्ध भएपछि यहाँको चाप स्वतस् कम हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत शक्ति, सेवा, सुविधा विकेन्द्रित गरेर राजधानीमाथिको दबाब कम गर्नुपर्छ, नत्र अहिलेको दबाब धान्न सकिन्न ।
महानगर फेरिन्छ । महानगरको पुनस्निर्माणको काम अघि बढेको छ, ऐतिहासिक सम्पदाको पुनस्निर्माण र संरक्षणको काम अघि बढेको छ । पूर्वाधारको विकास र सुधार नयाँ प्रविधिमा गर्ने हो । मोनो रेल र मेट्रो रेल सञ्चालन अर्को योजना हो ।
स्मार्ट सिटी काठमाडौँभित्र बन्दैन । तर, स्मार्ट सिटीमा पाइने सुविधा हामीले उपलब्ध गराउने हो । अलग्गै सहर बनाउन यहाँ ठाउँ छैन, त्यसैले स्मार्ट सिटी बनाउनचाहिँ सकिन्न । त्यसको साटो स्मार्ट सिटीको सुविधा दिन सकिन्छ । बिस्तारै ‘पेपरलेस सोसाइटी’मै जाने भनेका छौँ ।
जनताकै काममा व्यस्त थिएँ । अहिले यो अन्तर्वार्ता दिँदा पनि तीनवटा बैठक छाडेको छु । यस्तै हो, समय एक ठाउँ व्यवस्थापन गर्दा अर्को्तिर क्षति भइरहेको हुन्छ । तैपनि, त्यहाँ मैले प्राविधिक निरीक्षण टोली पठाएको थिएँ । म तत्कालै नपुगे पनि कर्मचारी तुरुन्तै पुग्नु नै मेयरको प्रतिनिधित्व हो ।
महानगरको बेथिति र अस्तव्यस्तता समाप्त गर्न सार्थक सुरुआत नहुनुमा तपाईंको योग्यता, कर्मचारीको अकर्मण्यता र स्रोत–साधनमध्ये के कुराले बाधा र्पुयाएको छ ?